China okwakhiwa iphepha Flat ibhegi mveliso kunye nabenzi | Hong Bang
Flat Ezantsi Ingxowa
Iphepha elimhlophe lephepha lesingxobo esisezantsi esisezantsi
Ingxowa yephepha leKraft yokuPakisha kweKofi kunye neTi
Ukuprintwa okuPhezulu okuPrintwayo kwePlastiki kwePlastiki ...
UkuPrinta okuPrintwayo kwePlastiki yePlastiki yesiqhelo
Isixhobo sePlati sePlati esezantsi
Flat Ezantsi & Yimani phezulu Ingxowa
Ukudibanisa ezona mpawu zibalaseleyo zeQuad Seal kunye nePhakamisa isingxobo, I-Kraft Paper Flat Bottom Bag (ekwabizwa ngokuba yiBhokisi yakutya) inesibheno esishelufayo, ngelixa isenza nkulu ishelufu kunye nendawo yokupakisha ngesitayile sebhokisi esezantsi. Flat Ezantsi Bags ukuvumela ukuzaliswa top phezulu kwaye ifanele ezahlukeneyo izicelo zemarike, ukusuka kwaselwandle, ikofu, kunye muesli, ngokusebenzisa ukutya kwezilwanyana kunye nemveliso horticulture.
Iimpawu zeBlack Paper Flat Bottom Bag
Ukukhuselwa okuqinileyo okuqinileyo kubonelela ngqongqo olufanelekileyo lokuzimela ngokugqibeleleyo.
Iigussets ezininzi zivumela uphawu lokudibanisa kunye nendawo yoyilo.
Imilo efana nebhokisi ibonelela ngokusetyenziswa kwendawo ephezulu, kokubini kwishelufa kunye nasekuhambiseni.
Ingabandakanya iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezizodwa, ezinje ezinokuphinda zisebenze ngaphambili, iziporho, iincwadana ezilula, iliso le-laser njl. Njl. Ifanelekile kwiimveliso ezahlukeneyo ezomileyo, ifriji kunye nefriji
Iipropathi ze Iphepha lasekhaya Flat Ezantsi Ingxowa
I-Kraft Paper ibhegi esezantsi yetafile yenziwa ivela kwizinto ezininzi zokuthintela izinto ezinokuhlelwa ngokwamaqela ama-3 aphambili, ahlanganisanayo ukubonelela ngengxowa enezinto ezizinzileyo nezinganyangekiyo. La maqela ma-3 a:
Umaleko ongaphandle: Ivumela ushicilelo lwegraphic ukuba lwenzeke, kuthwala intengiso enxibelelana nomyalezo wophawu kunye nokubhenela kubathengi.
Ulwaleko Ophakathi: Isebenza njengesithintelo sokukhusela ukuqinisekisa ukuba umxholo wengxowa ugcinwa ukhuselekile kwaye uhlaziyiwe.
Uluhlu LwangaphakathiUluhlu olubaluleke kakhulu phakathi kwezi zintathu. Olu luhlu luhlala luvunyiwe yi-FDA ukuqinisekisa ukuba ukutya kukhuselekile xa unxibelelana nokupakisha. Kukwatywinwa bubushushu ukuqinisekisa abathengi ukuba isingxobo asikhange siphazanyiswe.
Ukutya kwePetroli Yima iNgxowa yakho kuvumela neempawu ezinokwenziwa ngokwezifiso ezinje ngee-zipper, imingxunya ephezulu, iinyembezi kunye neewindows ukuphucula ukusebenza kwazo
Ukhuseleko kunye nomgangatho ophezulu
iya kuba ngumgaqo wethu wokuqala. Yonke imveliso yethu yenziwe ngezinto zokutya ezikwibakala lokutya oko kuthetha ukuba ifilimu esiyisebenzisayo, i-inki kunye nomgca wemveliso zi-100% zokhuseleko kuye wonke umntu omdala nokuba ngumntwana. Ngapha koko, singqongqo ngomgangatho oko kuthetha ukunganyamezeli nakweyiphi na indlela yokulalanisa ebonisa kulwakhiwo olomeleleyo, ukuqina komoya kunye nokushicilela okucacileyo. Ukupakisha umdlalo oethe-ethe kunye nogqibeleleyo kunye neemfuno zabathengi ziya kuhlala ziyinjongo yethu.
Uyilo kunye noLwenziwo
Nantsi Ukupakisha kweHONGBANG. Sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha iingxowa zokutya kwiimfuno ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa. Sitshele imfuneko sakho siya kudibana nazo zonke iintlobo zeemfuno. Asivelisi iimveliso kwaye sizama ukukuqhubela kuzo; simamela kwiimfuno zakho kunye neenjineli ezintsha eziza kusombulula iingxaki zakho zokupakisha.
Sineqela lenkonzo yabathengi elisebenzayo ukuphendula nokusombulula umbuzo ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ityala ngalinye liya kuba nomntu othile ukuqinisekisa ukuba uyilo, ubungakanani, umgangatho kunye nomhla wokuhanjiswa ziyahambelana neemfuno. Siyakuthanda ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kwaye sinike inkxaso enkulu kumthengi wethu.
Egqithileyo Flat Ezantsi & Yimani phezulu Ingxowa
Okulandelayo: UkuPrinta okuPrintwayo kwePlastiki yePlastiki yesiqhelo
Ingxowa yePlastiki yePhepha
Ingxowa yeplastiki yokutya
Ukuprinta iiNgxowa zePlastiki
Flat ibhegi esezantsi
Idilesi: Igumbi 607, ukwakha C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, District Longgang, Shenzhen City, kwiPhondo Guangdong
Umnxeba: 0755 2898 8518
Ithemba lophuhliso lwengxowa yephepha okwakhiwa kuyo
Indonesia International Ukupakisha Exhibition
Ukuprintwa kwe-Hong Kong kunye nePakethe ...
© Copyright - 2021-2023: Onke amalungelo agciniwe.